★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်တွေဟာ သမီးအရင်းကို လိင်ဆက်ဆံခွင့် ရှိကြောင်းဆွေးနွေးချက် .. ရှက်.. ရှက်.. ရှက်
မွတ်ဆလင်တွေဟာ သမီးအရင်းကို လိင်ဆက်ဆံခွင့် ရှိကြောင်းဆွေးနွေးချက် .. ရှက်.. ရှက်.. ရှက်
အဲလောက်ယုတ်ညံ့တဲ့ဝါဒကို ကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို အပြစ်မတင်လိုပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဦးဏှောက်ဟာ မူမမှန်ဘူးလို့ တကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်ခံပြီး မွတ်ဆလင်တွေကို တန်းတူဆက်ဆံနေတဲ့ မြန်မာတွေကို (ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်) အရမ်းရွံမိတယ်။ သမီးအရင်းကို လိင်ဆက်ဆံလိုတဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ မြန်မာတွေ ကိုယ်တိုင် သူတို့သမီးကို ဖေါက်ပြန်လိုတဲ့ စိတ်ရှိလို့ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ အရက်သမားဟာ အရက်သမားနဲ့ပဲ ပေါင်းလို့ရတယ်မဟုတ်ပါလား၊ ဒီတော့ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံနေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ မရိုးသားဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒန်.. ဒန်.. ဒန်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:58 AM
ရှက် .... ရှက်.... ရှက်...
ကောင်းလိုက်တာ..... သူတို့ကို အဲ့လိုပြောမှရတာ.....သူတို့က လူလိုပြောရင် လူလိုနားမလည်တဲ့ဟာတွေ.... သူတို့မှ သူတို့ပဲ ကောင်းတာ... လိပ်မျိုးတွေ.... မဟုတ်တာပြောဖို့ဆိုရင် ဂေါတမကိုတောင် ဗမာလူမျိုးလို့ ပြောချင်ရင်ပြောဦးမှာ.... မွတ်စ်တွေကို ဘာလို့ဒီလောက်မုန်းမှန်းတော့ မသိဘူး... အင်း..အကြောင်းတခုခုတော့ ရှိရမယ်.... အကြွေးယူပြီးပြန်မဆပ်နိုင်လို့များလား.....အော... ဘတုတ် ဘတုတ်..အဲ့...ဗုတ်ဓ ဗုတ်ဓ... ပြောတော့ ငြိမ်းအေးမှုကိုရှာတယ်တဲ့... ခုတောင် ပူလောင်နေပါလား... သူများကောင်းစားတာကို မနာလိုဖြစ်နေတယ်....
ရာဇဝင်ကို သေသေ ချာချာ ဖက်ပီးမှမင်းတိုတွေပြောသင့်တယ် ဗမာဘရင်လက်ထက်ကကိုယ်အမျိုးအနွယ်ကိုပြန်ယူတာဟုတ်ပါတယ် ။ မင်းတိုပြောသလိုအရင်းကြီးကိုပြန်ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝမ်းကွဲအမျိုးအနွယ်အခြင်းခြင်းယူကြတာပါ။ ဒါကိုသေသေချာချာမသိပဲပြောနေရင် မင်းတိုစကားများရန်ဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်လိမ်မယ်။ငါပြောချင်တာကဘယ်သူမဆို ကိုကိုးကွယ်ရာဘာသာနဲပတ်သတ်ပီးသိသင့်သိထိုက်တာတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ တခြားဘာသာနဲ့ပတ်သတ်ပီးဝေဖန်ခြင်တယ်ဆိုရင်လဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပီးကိုကိုယ်တိုင်ရေရေလည်လည်သိအောင်လုပ်ပါ။ ကို့ကိုယ်ပိုင်ညဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။မရှင်းမလင်းဖြစ်တဲ့အချက်တွေကိုတကယ်တတ်သိတဲ့တွေနဲ့တွေ ပီး မေးမြန်းပါ။ပီးရင်ကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။အခုတော့မင်းတို့တွေကကြားဖူးနားဝနဲ့ဆုံးဖြတ်ပီးပြောကြတယ။်အစ်စလမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လဲ ကိုရမ် ကျမ်း မှာရော ဗလီတွေမှာပါ ဟောပြောတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ဟောကြား ချက် ၊ နောက်ပီးအစဉ် အ လာအရ မိဘများက်အစ်စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်မိမိကတိုင်လည်းဒီဘာသာဝင်ဖြစ်လာပီး ကိုကိုတိုင်မလေလာပဲ ဘာသာခြားတွေအပေါ်အရမ်းကာရော မဝေဖန်သင့် ၊မပြောသင့်ဘူး။လေလာပါစာများများးဖတ်ပါ၊ကိုပိုင်ညဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။အပေါ်ယံလောက်ဖတ်ပီး မစဉ်းစားပဲ မ ပြောသင့်ဘူး။ရှုတ်ချ ခြင်တဲ့စိတ် နဲ့လေလာရင်အမှန်အတိုင်းသိမှာမဟုတ် ဘူး။ဘာသာတိုင်းကိုငါရည်ညွန်ပီးပြောတာပါ။တကယ်လို့ ဒိထက်ပိုပီးပြောခြင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ စီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆဲဖိုဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်သိခြင်တဲ့အချက်တွေကိုဝင်ပီးဆွေးနွေးနိင်ပါတယ်။
ခွေးသခိုးမွတ်ဆလိမ်တွေ မင်းတို့က ကိုမေကိုလိုးတွေ မင်းတို့ဟိုဟာမက်က ဝတ်နဲ့လိုး ခွေနဲ့လိုးပြီးရထားတာမင်းတို့ဝတ်သားဘာကြောင့်မစားလဲမေးလို့ မဖြေရဲဘူး
မွတ်စလင်လဲ လူပါပဲ.. သူတို့တွေကိုတော့မစော်ကားသင့်ဘာဘူး ကို(အောင်)ပြောသလိုပါပဲ ။ သူတို့ကို ပိုလေ့လာခိုင်းသင့်ပါတယ်... အယူအဆတွေကို (အမှန်တရားကို)သိမြင်ရင် ပြင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့... ဗုဒ္ဓဘာသကနေ တုထားတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ မွတ်စလင်တို့ရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာရှိပါတယ်...(ဒါတွေကိုတော့ မွတ်စလင်တွေ လက်ခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး) ဥပမာ ဗလီထဲမှာဘုရားရှိခိုးခါနီး ၀ဇူလို့ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်မျက်နှာလက် သန့်စင်ခြင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေက စခဲ့တာပါ...
၀က်သားကိုတော့ အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို ဘုရားသခင်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်..ဘုရားနှုတ်တော်က ကိုယ်တိုင်ပြောတာကို ကြားခဲ့ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး... ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ လက်ခံထားတာပါ... ၀က်သားကို မစားရပဲ ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းထားသလဲ ဆိုတော့ သန့်ရှင်းရေးအတွက်နဲ့ သူ့အမိန်ကို လူတွေ ဘယ်လောက်နာခံလဲ ဘုရားသခင်က သိချင်လို့ပါတဲ့....
မွတ်စလင် လူကောင်းတွေ ရှိပါတယ်... (လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ကျမ်းထဲက လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့တော့ လွဲကောင်းလွဲနေပါတယ်)
ကိုဇော်မျိုးကိုထောက်ခံအားပေးမှု မလုပ်သလို ... မွတ်စလင်(လူ)များကိုလဲ မမုန်းတီးပါ (အစ္စလာမ်တော့မပါ.. အဲဒီ အယူအဆတွေကိုမကြိုက်မိလို့ပါ)
ကိုဇော်မျိုးကြီးကိုလဲ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်.... အရမ်းကာရော လိုက်ဆဲတာတွေ နည်းနည်းလျော့စေချင်ပါတယ်..
ကိုkyawsitt ပြောသလိုလေ့လာပြီးမှပြောသင့်တယ်ဆိုတာ အလွန်မှန်တဲ့စကားပါ...ဒါပေမယ့် ခက်တာက ကိုkyawsitt ကိုယ်တိုင်က မလေ့လာပဲနဲ့ တတ်သလိုလို မှတ်သလိုလိုနဲ့ ဝင်ပြောတာတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်...အစ္စလာမ်ဘာသာက ဗုဒ္ဓဆီက ကောင်းတာတွေကိုတု တယ်လို့ပြောတာဟာ သမိုင်းသိတဲ့လူတွေအတွက် ပြက်လုံးတစ်ခုကြားရသလိုဖြစ်နေပါပြီ...သိပ်ပြီးပြောချင်သပ ဆိုရင်လည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးတော့ ပြောပေါ့ဗျာ...အစ္စလာမ်သာသနာက ဘယ်ခေတ်ကနေ အစပြုလာတယ်...အစ္စလာမ်ရဲ့ကျင့်ထုံးတွေက ဘယ်ခေတ် ဘယ်သမယ ကနေ စတင်လာတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းလေးလေ့လာလိုက်ပါဦးဗျာ...ဟုတ်ပြီလား...ပြီးတော့ ခင်ဗျားပေးတဲ့ ဥပမာကလည်း တော်တော်လက်ခံချင်စရာပဲ...ဘုရားဝတ်မပြုမီ ခြေလက်မျက်နှာ ဆေးတာက သူများလုပ်တိုင်း လိုက်တု ပြီးလုပ်ရမယ့်ဟာလား? ဒါမှမဟုတ် သူ့ပင်ကိုယ် အနေအထားအရ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ဟာလား? အသိဥာဏ်ရှိရင်စဉ်းစားတတ်ပါလိမ္မယ်....ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ...အခုလို မရိုင်းမစိုင်းပဲ အထက်တန်းကျကျ ဆွေးနွေးတာမျိုးဆို အားလုံးကို ကြိုဆိုလျက်ပါ...
"ဗမာ့သွေး စစ်စစ်တွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ မင်းလို လူကို မေးခွန်း နုနုလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ချင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦး"
၁။ အနော်ရထာမင်း ပိဋက သုံးပုံကို မြန်မာပြည် ယူမလာခင်က မြန်မာပြည်မှာ အရည်းကြီးတွေ ကြီးစိုးခဲ့တယ်။ အဲဒီ အရည်းကြီးတွေကို ဗမာလူမျိုးတွေ မင်္ဂလာဆောင်ရင် သတို့သမီးကို အရည်းကြီးတွေနဲ့ တစ်ညပေးအိပ်လေ့ရှိကြတယ်။ ပြီးမှ အဲဒီသတို့သမီးကို သတို့သားက ကာမစပ်ယှက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီသမိုင်းကိုကြည့်ပြီး ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် မင်းလို ဗမာသွေးစစ်စစ် ရှိတဲ့လူတစ်ယောက် ဒီလောကကြီးကို ရောက်ရှိလာဖို့ဆိုတာက အရည်းကြီးတွေရဲ့ တစ်လျှော့ ပါမှဖြစ်မှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား? :) အဲဒီအရည်းကြီးတွေက ဘယ်သူတွေလဲ?ကုလားတွေပဲမဟုတ်လား? ကုလား တစ်လျှော့ဗျင်းလို့ လူဖြစ်လာတဲ့ မင်းလို ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ငါဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မင်းက ဗမာစစ်စစ်ပေါ့နော်? :)
၂။ မင်းတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓကြီးဆိုလား ကုလားကြီးဆိုလား မသိပါဘူး ထားပါတော့.. အဲဒီ ဘုရားက မင်းတို့ ကိုယ်ပိုင်ဘုရားလား? အငှားလား?
၃။ မင်းတို့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ ဘုရားရဲ့ သားတော် သံဃာတော်တွေက ခွက်တစ်လုံးကိုင်ပြီး တောင်းမစားရရင် အသက်မရှင် နိုင်ဘူးလား?
၄။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ ဖိနပ်ဝယ်စီးဖို့ရော ပိုက်ဆံမရှိကြဘူးလား?
၅။ မင်းတို့ သံဃာတော်တွေက မိန်းမယူလို့မရဘူးနော်? ဒါကြောင့် ဒကာမတွေက ညပိုင်းဆို ကိုယ့်ယောက်ျားတွေနဲ့ ကိုယ်အိပ်ကြပြီး နေ့ပိုင်းဆို ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားအိပ်တာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ဒကာမတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ ကြားရဖန်များလို့ ရိုးအီနေပါပြီ။ ငြင်းများငြင်းချင်သေးလား ကိုဗမာစစ်စစ်ကြီး?
၆။ သြော် မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက အရက်သမား ငမူး ဖေကြီးကျော်ကိုလည်း ဦးချ ရှိခိုးတာပဲလား? တော်တော် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ သာသနာပေါ့နော်?
၇။ မင်းတို့ ဦးချရှိခိုးနေတဲ့ ဘုရား ရုပ်ထုတော်၊ ဆင်းတုတော်တွေက ပန်းပုသမားတွေရဲ့ ခြေထောက်အောက်၊ ဖင်အောက်ကနေ ထွက်လာတယ် ဆိုတာကိုရော မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား? ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား?
ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ မိတ်ဆက်မေးခွန်းတွေပေါ့။ နောက်ဆိုရင် နှိပ်စက်မေးခွန်းတွေလာမယ် သတိသာထားနေလိုက်..
မစောင့်နိုင်ရင်တော့ လိုက်လာခဲ့ပေါ့.. ဒါ ငါ့အကောင့်ပဲcomplete.ismail@gmail.com
မင်းတို့ကောင်တွေအဲလိုတော့ လိုက်လာရဲလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူးကွာ.. မင်းတို့က လူမမြင် သူမမြင် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ လာပုန်းပြီးအော်နေတာ... ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လ သာ.. ထမိန်ခြုံထဲက လက်သီးပြ ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့.. သတ္တိရှိရင် အပြင်ထွက်ပြီး အော်ပါ့လား? ဒါမှမဟုတ် အင်္ဂလိပ်လိုတင်ပါ့လား.. ကြည့်ရတာ အင်္ဂလိပ်လည်း A ကနေ စတာလား.. Z ကနေ စတာလား.. သိရဲ့လားလည်း မသိဘူး..
လူဖြစ်ပြီး မိန်းမ ယူနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓအခြောက်ကြီးကို ကိုးကွယ်ပြီး မိန်းမလျာစိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်တွေ စောက်ကြောက်တွေ.. ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့ တရားဝင်လက်ထပ်ယူပြီး မယားမှတ်မှတ် သားမှတ်မှတ် ပေါင်းတဲ့သူတွေကို မုဒိမ်းကျင့် တယ်လေး ဘာလေးနဲ့ အရူးချီးပန်း လျှောက်အော်နေတာ... မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးရမှန်းတောင် မသိရှာဘူး... ဒါနဲ့များ သူ့ကိုယ်သူ ဗမာတဲ့ဗျာ... ဗမာလို့ပြောပြီးတော့တောင် ဗမာစကားမတတ်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးတင်ဖို့ ဝေလာဝေးပေါ့... တော်တော် သနားဖို့ကောင်းတဲ့ ဗမာလေးတွေ... မင်းတို့ကများ ဗလီတွေ မရှိစေရဘူးတဲ့.. စမ်းကြည့်လိုက်လေ.. ဗလီတစ်လုံး အစားမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း သုံးကျောင်းကတော့ သေချာတယ်ဆိုတာ မသေမချင်းမှတ်ထားလိုက်.. မယုံရင်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်... ထမိန်ခြုံထဲက လက်သီးပြမယ့်ထဲမှာ မွစ္စလင်မ်တွေမပါစေရဘူး...
"အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုက်မှာ အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးကို ဖြန့်ဖြူးနေကြသော သံဃာတော်ဘုန်းကြီးများနှင့် သူတို့၏ အလိုတူအလိုပါများ ထံသို့"
ခင်ဗျားတို့မှတ်ထား ရမှာက... အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဝက်သားကိုအပြစ်တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက- ဝက်သတ္တဝါဟာ အလွန်တရာ ညစ်ညမ်းပြီး ရွံရှာစက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သတ္တဝါဖြစ်လို့ပါ...ခင်ဗျားဦးနှောက်နဲ့ လိုက်မီမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ရေးတာလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ စာကောင်းကောင်း ဖတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဒါမှသဘောမပေါက်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဆရာတော် ဦးထိပ်ပြောင်များကို မေးကြည့်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကမှ သဘောမပေါက် ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ topaz ဓါးနဲ့ ခေါင်း သားရေကိုသာ ခွာချလိုက်ပေတော့ဗျာ။
ဒီမှာမှတ်ထားဗျ။ သိပ္ပံဆိုတာ ကြားဖူးပါတယ်နော်- တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားတဲ့ သိပ္ပံရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကိုပြောမှာ---
၁။ ဝက်သား စားသုံးခြင်းဖြင့် ရောဂါများစွာ ဝင်နိုင်သည်
ဆင်ခြင်တုံတရားကျကျ၊ ယုတ္တိဗေဒနည်းဆန်ဆန်လည်းဖြစ်တယ်။ ဝက်သားကို စားသုံးမှီဝဲ ခြင်းဖြင့် ရောဂါ အမယ်ပေါင်း ခုနှစ်ဆယ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။လူတွေမှာ သန်လုံးကောင်၊ တုတ်ကောင်နဲ့ ချိတ်သန် စတာတို့လိုမျိုး သန်မျိုးစုံ စွဲကပ်နိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးကတော့ တေနီယာ ဆိုလျမ်ပါပဲ။ ဒီကပ်ပါးက လူသာမန်တို့ကတော့ တုတ်ပြားကောင်ရယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အကောင်က အတော်ရှည်ပြီး အူထဲမှာနေတယ်။ ၄င်းရဲ့ ဥက သွေးစီးကြောင်းထဲဝင်ပြီး လူ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပိုးက ဦးနှောက်ထဲဝင်သွားရင် မှတ်ဥာဏ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးထဲကိုဝင်ခဲ့ရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်စေ့ထဲဝင်ခဲ့ရင်တော့ မျက်စေ့ကွယ်သွားတတ်တယ်။ အသည်းထဲ ဝင်ခဲ့ရင်တော့ အသည်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကိုပဲ ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အန္တရာယ် ကြီးမားတဲ့ သန်ကောင်ကတော့ ထရီချူရာ တီချုရာစစ် (Trichura Tichurasis) ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဝက်တွင် အဆီကို ဖွဲ့စေသော ဝတ္ထု ရှိသည်။
၃။ ဝက်သည် ကမ္ဘာမှာ အညစ်ညမ်းဆုံး သတ္တဝါ ဖြစ်သည်
၄။ ဝက်သည် အရှက်အမဲ့ဆုံးသော တိရစ္ဆာန်ပင်
၅။ ကုရ်အာန်က ဝက်သားကို တားမြစ်ထားသည်။
၆။ သမ္မာကျမ်းမှာလဲ ဝက်သားကို တားမြစ်ထားသည်
ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ အဲဒီလူမျိုးတွေဟာ ဝက်သားစားပြီး ဝက်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ ဝက်လူမျိုးတွေပဲ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ တံငါသည် အဲလေ မှားလို့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ မိသားစုတွေရော ဝက်သားစားတဲ့ထဲမှာ ပါလား မသိဘူ။ ဒီမိုကရေစီမရသေးလို့ပဲ တော်သေးတာပေါ့ ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီသာ ရခဲ့ရင်တော့ ခင်ဗျားမိန်းမကို ခင်ဗျားက ၊ ခင်ဗျားညီမကို သူ့လင်က ၊ ခင်ဗျားအမေကို ခင်ဗျား အဖေက ဘယ်သူနဲ့မိတ်ခေါ်ပေးပြီး ဘယ်သူ့ ခွခိုင်းမလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ငါ့ကောင်ရေ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်မယ်- တကယ်လို့ အရင်ကတည်းကသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရခဲ့ရင် မင်း အဖေ ဘယ်သူလဲ? မင်းဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ်မှာလဲ?ငါ့ကိုတော့ အဖေ လာမခေါ်နဲ့နော်
ခု ‌ပြော‌နေတာ ကအလ္လာက‌ပြော ခဲ့တာလား။မိုဟာမက်‌က ‌ပြောခဲ့ တာလား။မိုဟာမက်‌စကား ကိုယုံရမှာ လား။လိမ်‌မ‌ပြောခဲ့ဘူး လို့ဘယ်‌သူ အာမခံ နိုင်‌သလဲ။
မူဆလင်​​လေး​ရေ ဘာလို့အလာကိုမယုံသူ​တွေကိုဖန်​ဆင်းရတာလဲ အလာကိုမယုံတာနဲ့ဘာလို့လိုက်သတ်​​နေရတာလဲကွာ